6 oo ka mid ah 4 Khadadka Xariiqda Xariiqda Istaraatiijiyadeed ee Magaalada Istanbul ayaa ku sii socon doonta Borotokool Dheeraad ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul6 ee 4 Metro Line ee laga joojiyay Istanbul ayaa sii wadi doonta nidaamka dheeraadka ah
6 ee 4 Metro Line ee laga joojiyay Istanbul ayaa sii wadi doonta nidaamka dheeraadka ah
20 / 02 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
Isagoo ka hadlayey xafladda halkaas oo laga dhisayo jidka laamiga ah ee Dudullu-Bostancı ee u dhexeeya Dudullu iyo Bostancı, Duqa Uysal wuxuu yidhi, “Hadafkeennu waa inaan dhisno metrooga si dhakhso leh oo aan u xallino dhibaatooyinka gaadiidka ee Istanbul. Sababtaas awgeed, waxaan go'aansanay inaan sii wadno hab-maamuuska dheeriga ah ee leh 6 laga soo bilaabo qadka metro-ka 4 ee la kansalay. Wadahadallada khadka 2 ayaa sii socda. Kul
Duqa magaalada Uysal ayaa sii waday khudbadiisa isagoo carrabka ku adkeeyay in ilaa 2023, ay jiraan bartilmaameedyo mitir dhererkoodu yahay 1000 kiilo mitir oo ku yaal magaalada Istanbul oo ay ka shaqeynayeen jihadaan habeen iyo maalin. Waxaan rabnaa in marinkeenna tareenka uu ku dhammaado si dhakhso leh. Mid ka mid ah shirkadaheena, kaas oo hadda sameynaya tan, waa mid ka mid ah kuwa la baajiyay qandaraaskii dhulka hoostiisa ee 5, Kirazlı-Halkalı qaybta shirkadeena. Waxaan casuumay shirkadaha waxaanan nidhi 'Waxaan dooneynaa in dhismayaasha metro si dhaqso leh loo dhammeeyo'. Shirkadaha, 'Waxaan heysanaa qandaraasyo. Dhab ahaan waan u wadnaa. Kadib waxaan u dirnay warqad kansal ah. Waa tan halkan. Oo iyana waxay na weyddiiyeen waxaan dooneynay. Waxaan u sheegnay, 'Waxaan dooneynaa inuu waqtigiisa ku dhammaado'. Dunida dhexdeeda, celcelis ahaan metrikadaha tareenka dhulka hoostiisa mara ee 3-4, maxaynu ugu dambaynay sannadka '7-8'. Maxaynu markasta ugu soconnaa xadka sare?
-Waxaan Joognay Khadka 6 ee 4 oo leh Protocol Dheeraad ah
Duqa Magaalada Uysal wuxuu sheegay inay sabab u siinayeen shirkadaha qandaraasleyda ah “in la wareegitaanku si dhakhso ah uusan u dhicin isla markaana rukhsadihii loo baahnaa aan si dhakhso ah looga qaadin hay'adaha sida Monuments Board ve wuxuuna cadeeyay inay u arkeen sababahan inay macquul yihiin: Ganacsiga degmada. Waxaan u sheegnay shirkadaha 'Aan ogolaanno shaqadeena degmo ahaan, adiga oo ah qandaraasle samee shaqadaada'. Saraakiisha shirkadda ayaa sheegay inay ku farxi doonaan. Markaan fiirino marka waxyaabaha si sax ah loo soo wargeliyo oo wax la sameeyo oo uu jiro qorshe, waxyaallahu way degdegayaan. Sidaa darteed, haddii dhismaha Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line uu ku dhammaado waqtigiisa, dhamaadka 2018 ayaa la dhammeyn doonaa bilowga 2019. Waxaan ka go'an nahay tan oo waxaan sameyneynaa borotokool dheeraad ah. Xilligan xaadirka ah ee 'Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Line, waxaan ku heshiinay sida ugu dhakhsaha badan ee loo dhammaystiro qaybta Çekmeköy ka dib khadka' üsküdar-Ümraniye ', kaas oo la furay ka hor intaan soonka la dhammayn. Si kale haddii loo dhigo, waxaan go'aansanay inaan sii wadno hab-dheeri dheeri ah oo leh 6 laga soo bilaabo xariiqda metro ee 4 ee la kansalay. Labada kale. Halkalı-Waxaan ka shaqeyneynaa mashruuc dakhli-abuuris ah sida ku xusan nidaamka cusub oo leh waddo beddelidda khadka khadka 'Baçeşehir Metro Line'. Waxaan qaabeeynaa ugu yaraan laba bilood. Sidoo kale, haddii aan oggolaano Pendik-Tuzla Metro Line oo leh waddo yar oo la beddelo, waxaan ku sii wadi doonnaa isla hindisadaas. ”
Gaadiidka Gawaarida Naafada-
Duqa magaalada Uysal wuxuu cadeeyay in qaybta ugu weyn ee miisaaniyada IMM loo qoondeeyay gaadiid isla markaana dadka dagan Istanbul ay u arkeen sorun Istanbul Traffic büyük dhibaatada ugu weyn.
Uz Waxaan qorsheyneynaa inaan abaalmarino ugu yaraan seddex khad ilaa dhamaadka 2018 jidadka cusub. Waxaan dooneynaa inaanu kordhino dhererka mitirka illaa 2023 kiiloomitir oo ku yaal magaalada Istanbul ee 1000 anagoo sameynayna hindisooyinka oo dhan. Dabcan, waxaa laga yaabaa in isbeddelo ku yimaaddaan qorshayaasha iyo dariiqyada horey loo sameeyay. Si kastaba ha noqotee, daraasadihii la sameeyay ka hor, marka mitirka dhererkiisu yahay 1027 kiiloo mitir ee Istanbul la dhammeeyo, daraasad ayaa la sameeyay oo xallin doonta dhibaatada gaadiidka magaalada. Waxaa jiri kara 1100 ama kabadan oo cusub oo cusub. Laakiin 2023, waxaan higsaneynaa inaan ka dhigno magaalada Istanbul magaalada leh metroga ugu dheer adduunka ee adduunka. Metro aad ayey muhiim ugu tahay Istanbul. Sidaa darteed, gaadiidku wuxuu sii wadi doonaa mudnaanteena koowaad.
Madaxweyne Uysal waxa kale oo uu u mahadnaqay shaqaalaha iyo hawl-wadeenada farsamada ee geesiyaal aan muuqan ee marinnada dhulka hoostiisa ku jira oo sawir adag laga qaaday.
Sharraxaadda Mashruucyada la joojiyay ee laga soo daayay Alarko
Shirkadda Topbas ayaa la joojiyay mawaadiicda macaamiishu waxay qarash gareyn doonaan 3.3 Milyan TL
Magaalada Istanbul ee caasimada Kadıköy - Mashruuca Kartal Metro oo la joojiyay…
5 kooxood oo hindisooyin ah ayaa baajiyay Mashruuca Hordhac Nidaamka Nidaamka hoosaadka Izmir Proj
Ku dhawaaqida qandaraaska: 50 gawaarida xawaaraha iyo ve
Shidaalka TCDD iyo Xarunta Sahayda Saliida Daran, Saldhig biyo Biyo jilicsan oo leh 20…
3 oo beddelka u ah in la joojiyo hindisaha privatization ee buundada
Joojiyay Yerköy Yozgat Sivas ee dhismaha kaabayaasha dhismaha wuxuu jaray 2 kesim
Waa la kansalay Ankara - Sivas Railway Yerköy - Yozgat - Sivas altyapı
Dudullu - Bostan Metro Line
Qeybta Metro ee Göztepe-Ataşehir-Ümraniye
Halkalı-Bahçeshehir Tareenka Tuulada
Kirazlı-Halkalı Khadadka Subway
Mecidiyeköy-Mahmutbey Line Metro
Otokar waxay ku guulaysatay Terminal Bus ee 400 ee Roomaania